Hargeysa: Siilaanyo oo xilka ka qaaday wasiir caan ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Hargeysa: Siilaanyo oo xilka ka qaaday wasiir caan ah
25th May 2014 A warsame Af Soomaali 0
Hargeysa – Mareeg.com: Madaxweynaha maamulka Somaliland, Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa xilkii ka qaaday wasiirkii Ganacsiga maamulkaas, Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar oo horayna u ahaa wasiirka arrimaha debadda iyo iskaashiga caalamiga ah.
Warsaxaafadeed hada ka soo baxay Madaxtooyada Somaliland ayaa lagu sheegay in madaxweyne Siilaanyo uu digreeto madaxweyne xilkii uga qaaday wasiirkii wasaaradda Ganacsiga iyo Maalgashiga Caalamiga ah, isla markaana waxa uu madaxweynuhu wasaaradda u magacaabay wasiir cusub.
“Waxa aan aad kuugu mahadinayaa mudadii aynu wada shaqaynaynay. Xilalka Qaranka ayey dabcigiisa tahay in ay meerto noqoto oo kolba cid hanan karta loo dhiibo. Sidaa darteed, waxaan gartay in aan kaa qaado xilka Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Maalgashiga Caalamiga ah ee Somaliland” ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka kasoo baxay madaxtooyada Somaliland.
Axmed Siilaanyo ayaa wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga maamulka Somaliland u magacaabay Dr. Muuse Qaasim Cumar, wuxuuna wasiirkii hore ka rajeeyey inuu si niyad wanaag ah xilka kula wareejiyo.
”Haddaba, waxaan kaa rajaynayaa in si niyad sami ah aad ugu wareejiso xilka aad haysay Dr. Muuse Qaasim Cumar, oo aan xilkaa isaga ah u magacaabay” ayuu Axmed Siilaanyo ku yiri wasiirka uu xilka ka qaaday ee Maxamed C/llaahi Cumar.
Maxamed C/llaahi Cumar oo horay usoo noqday wasiirka arrimaha debadda Somaliland ka hor inta aan loo dhiibin wasaaradda xalay laga qaaday ayaa ka mid ah wasiirrada ugu caansanaa maamulka uu hogaamiyo Axmed Siilaanyo, wuxuuna sidoo kale ka mid ah guddiga wadahadalka ee Somaliland horay ugu soo dirsatay wadaxaajoodka ay la gashay dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Jabuuti: Dhimasho & dhaawac ka dhashay qarax lala beegsaday baar caan ah
Soomaaliya oo ka qeybgeleysa Olombikada dhalinyarada Africa (Sawirro)